Teori Pärm 7
Sanduuqa saqafka oo raran ma saamayn karaa wadista baabuurka?
Haa, waxaa fududaata in gaariga la leexiyo
Haa, isu dheeli tirnaanta gaariga ayaa xumaan karta
Haa, waxaa adkaata in gaariga la leexiyo
Maxaa run ah oo ku saabsan waddada?
Waa khasab in waddada baabuurtu xariiq leedahay oo calaamadaysan tahay
Khasab ma ahan inay waddadu xariiq leedahay
Maxaa shaqaynaya markaad dhaaftid calaamaddaan wadada ee masawirkan?
Waxaa la oggolyahay inaan waddadaan ku wado marka aan ku dejinayo rakaab oo kaliya
Xawaaraha ugu sareeya ee la oggolyahay waa 30 km/tim
Waxaa i saaran waajibka ka leexashada dadka lugaynaya iyo baaskiil wadayaasha
Xawaaraha ugu sareeya ee la oggolyahay waa xawaaraha dadka lugaynaya
Muraayadda haadka ayaad waxaad ka aragtaa darawalka gaariga kaa dambeeya inuu rabo inuu ku dhaafo ama ku baaso, laakiin waa meel aad u aragtid inaysan ku haboonayn in la isku dhaafo. Maxaad samaynaysaa xaaladaan oo kale?
Waxaan si fudud ugu joogsanayaa badeelka bareega si aan u dareensiiyo inaysan meeshu ku haboonayn in la isku dhaafo
Waxaan isku dayayaa inaan joojiyo ama xannibo isdhaafida anigoo isu badinaya wadada bartamaheeda inta suurto gal ah
Waxaan shidayaa ama daarayaa laydhadhka digniinta si aan u tuso darawalka inaysan meeshu ku haboonayn in la isku dhaafo
Waxaan fududaynayaa isdhaafidda anigoo isu badinaya dhinaca midig ee suurto gal ah
Maxaa ugu horrayntii go'aaminaya xawliga aad ku maraysid ama ku dhaafaysid isgoyska tareenka ee sawirkan?
Waddada xadkeeda xawaare
Qalabka nabadgelyada ee ku yaalla isgoyska tareenka
Aragtida isgoyska tareenka siday tahay
Maxay tahay inaad ka fikirtid xaaladaan?
In dhinaca bidix la iga dhaafi karo
in gaariga iga horeeya uu badalan karo haadka ama seedka
In gaariga iga dambeeya ay ku adkaan karto inuu soo galo haadkayga ama seedkayga marka uu i dhaafo ama i baaso ka dib
In la iga dhaafi karo dhinaca midig
In gaariga iga horeeya uu si kadis ah u istaagi karo
Dareere noocee ah ayaad ku shubaysaa meeshan?
Dareeraha ama saliida biriigga
Dareeraha ama biyaha qaboojiyaha
Dareeraha ama biyaha muraayadaha lagu nadiifiyo
Ma khasab baa inaad u daysid qof lugaynaya inuu maro meesha dadku wadada ka jaraan intaadan horay usii socon?
Haa, lakiin shaqaalaha waddada dhisa oo kaliya
Haa, maadaama ay meesha dadku wadada ka jaraan ay tahay meel aan la ilaalinayn
Maya, maadaama uu meesha ku yaallo laydhkii wadada kala hagayay
Maya, maadaama uu laydhku ka awood badan yahay calaamadda wadada
Waxaad ku waddaa 90 km/tim maalin xagaa ah oo qorraxi jirto. Masaafo intee le eg ayaad ugu yaraan u jirsanaysaa gaariga kaa horreeya?
Celcelis 50 mitir
Celcelis 90 mitir
Celcelis 30 mitir
Maxaa waajib ku ah darawal jiiray oo dardaray xayawaan/ugaadh sida eelye ama doofaar duureed?
Meesha shilka calaamadi waxaadna ku wargelisaa mulkiilaha dhulka
Meesha shilku ka dhacay calaamadi, booliskana ku wegeli shilka
Wargeli mulkiilaha dhulka iyo shirkadda caymiskaaga
Wargeli mulkiilaha dhulka iyo qofka xaqqa u leh ugaadhsiga
Waxaad ka degaysaa ama ka leexanaysaa waddada weyn ee haay-weeyga. Xaaladaan oo kale waxaa si fudud u ildyyfi kartaa xawligad ku socotay. Maxaa loola jeedaa inaad ilduuf xawaare (fartblind)?
Waxaan ka gaari waayayaa inaan arko calaamadaha iyo tilmaamaha kale ee wadada
Waxaan u arkayaa oo moodayaa inaan ku socdo xawli ama xawaare ka yar midka aan run ahaantii ku socdo
Wakhtigayga falcelinta ayaa ka wanaagsanaada sida caadiga ah
Wakhtigayga falcelinta ayaa ka xumaada sida caadiga ah
Waxaan u arkayaa oo moodayaa inaan ku socdo xawli ama xawaare ka badan midka aan run ahaantii ku socdo
Maxaa loola jeeda Nollvision?
In xadka lagu xukumi karo qofka cabsan laga dhigo kunkiiba 0
Inaysan mustaqbalka cidina ku dhiman ama ku dhaawacmin dhaawac halis ah wadooyinka
In laga dhigo baabuurta kaarboondhaayogsaaydhkooda boqolkiiba eber
Waxaad u leexanaysaa dhinaca midig ee isgoyska. Sidee ayaad u dhaqmaysaa?
Marka ugu horeeysa waxaan istaagayaa xariiqda istaagga agteeda, dabadeedna waan wadayaa
Waan wadayaa, maadaama nalka digniinta ah ee dhinacyada u densan yahay
Waan wadayaa, maadaama nalka casaanka/gaduudka ahi uusan aniga i quseeynin
Waan istaagayaa, maadaama nalka kala haga gawaaridu uu tusayo Casaan/gaduud
Maxay sheegaysaa sabuuradan dheeraadka ah?
Maqal hooseeya (Dhagool)
Arag hooseeya (camoole ama indhoole)
Waxaad ku soo dhawaatay meesha baabuurtu ku wareegto ee sawirkan. Sidee ayay tahay inaad u wadid si aad u yaraysid shidaal cunka gaariga?
Kasaar marshada (foolee) oo horay usii aayar ugu sii soco
Geli giyar ama marsho yar si aad dhakhso ugu sheelarayso
Biriigga matoora ku jooji gaariga
Xawliga soo yaree adigoo adeegsanaya biriigga matoorka, si haddii ay suurto gal tahay aadan ugu baahan inaad istaagtid